Akụkọ - Baker-Polito Administration na-ekwupụta ego maka teknụzụ Na-agbanwe agbanwe na Osisi Ọgwụ Mmiri
Nchịkwa Baker-Polito na-ekwupụta Ego maka Teknụzụ Na-agbanwe agbanwe na Osisi Ọgwụ Mmiri
Gọọmentị Baker-Polito nyere taa onyinye $ 759,556 iji kwadoo ọganihu ọhụụ isii maka teknụzụ maka mmiri mkpofu mmiri na Plymouth, Hull, Haverhill, Amherst, na Palmer. Ego a, nke enyere site na Massachusetts Clean Energy Center's (MassCEC) Mmemme Pilot Treatment, na-akwado ndị nwe obodo na-ahụ maka ịwaterụ mmiri mmiri na ndị isi na Massachusetts nke gosipụtara teknụzụ ọgwụgwọ mmiri ọhụụ na-egosi ikike iji belata ikike ike, weghachite akụrụngwa dị ka okpomọkụ, biomass, ume ma ọ bụ mmiri, na / ma ọ bụ nri ndị dị ka nitrogen ma ọ bụ site.
"Usoro mmiri mkpofu bụ usoro kpụ ọkụ n'ọnụ dị ike, ma anyị na-agbasi mbọ ike ka anyị na ndị ọchịchị na-arụkọ ọrụ ọnụ na mpaghara Commonwealth iji kwado teknụzụ ọhụụ na-eduga na ụlọ ọrụ dị ọcha na nke ọma," Gọvanọ Charlie Baker kwuru. "Massachusetts bụ mba onye ndu na ọhụrụ na anyị na-atụ anya ego ndị a mmiri oru ngo na-enyere obodo belata ume ojiji na-ebelata-akwụ ụgwọ."
"Supportkwado ọrụ ndị a ga-enyere aka ịkwalite teknụzụ ndị ọhụrụ ga-eme ka usoro ọgwụgwọ mmiri mkpofu dịkwuo mma, nke bụ otu n'ime ndị na-ere ọkụ eletrik n'obodo anyị," kwuru Lieutenant Gọvanọ Karyn Polito. "Ndi ochichi anyi nwere obi uto inye ndi ochichi nkwado nkwado iji nyere ha aka imeri nsogbu ha banyere mmiri mmiri mmiri ma nyere Commonwealth aka ichekwa ume."
Ego maka mmemme a sitere na MassCEC's Renewable Energy Trust nke ndị Massachusetts Legislature ahụ mepụtara na 1997 dịka akụkụ nke nchịkwa nke ahịa ọrụ eletriki. Nkwado a kwụrụ ụgwọ site na sistemụ-ụgwọ ọrụ ndị Massachusetts eletriki na-akwụ ụgwọ nke ngwa ọrụ ndị nwere ego, yana ngalaba ọkụ eletrik nke obodo ahọrọla itinye aka na mmemme ahụ.
"Massachusetts gbadoro ụkwụ iji zute ebumnuche anyị na-ebelata ikuku griinụ, yana iso obodo na obodo gafee steeti iji meziwanye arụmọrụ na usoro ọgwụgwọ mmiri mmiri ga-enyere anyị aka iru ebumnuche ndị ahụ," Onye ode akwukwo Energy na Environmental Matthew Beaton kwuru. “Ihe oru a nke usoro ihe a kwadoro ga enyere aka mee ka mmiri ghara ikopu mmiri were belata usoro iji ume ha eme ihe ma na-ebute abamuru gburugburu anyi.”
"Obi dị anyị ụtọ inye ndị obodo a ego iji chọpụta teknụzụ ndị na-agbanwe agbanwe nke na-ewetu ụgwọ ndị na-azụ ahịa ma melite arụmọrụ ike," '' Onye isi MassCEC kwuru, Stephen Pike. "Mmiri mmiri na-anọchite anya nsogbu na-adịgide adịgide maka ndị ọchịchị na ọrụ ndị a na-enye ihe ngwọta nwere ike inyere ndị Commonwealth aka ịkwado ọnọdụ ya dị ka onye ndu mba na arụmọrụ ume na teknụzụ mmiri."
Ndi okacha amara nke ngalaba Massachusetts nke Nchedo Gburugburu Ebe obibi tinyere aka na nyocha nke atumatu a wee nye ntinye aka banyere ogo ohuru a na-achoputa na ikike ikike ike nke enwere ike ime.
Ọrụ ọ bụla a na-enye bụ mmekọrịta dị n'etiti obodo na ndị na-ahụ maka teknụzụ. Ihe omume a weputara $ 575,406 ọzọ site na oru isii.
E nyere obodo ndị a na ndị ọrụ teknụzụ ego:
Plymouth Municipal Airport na JDL Nchekwa gburugburu ebe obibi ($ 150,000) - A ga-eji ego ahụ wụnye, nyochaa, ma nyochaa obere ume ike na-eme ka mmiri na-egbu mmiri na-arụ ọrụ n'ọdụ ụgbọ mmiri obere ọdụ ụgbọelu.
Obodo nke Hull, AQUASIGHT, na Woodard & Curran ($ 140,627) - A ga - eji ego ahụ mejuputa ma jigide usoro ọgụgụ isi nke akụrụngwa, nke a maara dị ka APOLLO, nke na-agwa ndị ọrụ mmiri na-ekpofu mmiri okwu na omume ọ bụla ga-eme ka arụmọrụ arụmọrụ.
Obodo nke Haverhill na AQUASIGHT ($ 150,000) - A ga - eji ego ahụ mejuputa ma jigide usoro ọgụgụ isi artificial APOLLO na ebe a na-agwọ mmiri mkpofu na Haverhill.
Obodo nke Plymouth, Kleinfelder na Xylem ($ 135,750) - A ga - eji ego ahụ zụta ma wụnye sensọ na - edozi optic nke Xylem mepụtara, nke ga - arụ ọrụ dị ka ụzọ bụ isi esi achịkwa usoro maka mwepụ nri.
Obodo Amherst na Thelọ ọrụ na-acha anụnụ anụnụ Blue ($ 103,179) - A ga-eji ego ahụ wụnye, nyochaa, ma nye ọrụ mgbapụta mmiri na-ekpo ọkụ, nke ga-enye ọkụ ọkụ na-agbanwe agbanwe, na-agbanwe agbanwe, na mmiri ọkụ na Amherst Wastewater Treatment Plant site na isi mmalite.
Obodo Palmer na Planlọ Ọrụ Planet Water ($ 80,000) - A ga - eji ego ahụ wụnye sistemụ njikwa ikuku na nitrogen yana ngwa ọrụ nlele.
"Osimiri Merrimack bụ otu n'ime akụ kachasị ukwuu nke Commonwealth anyị na mpaghara anyị ga-eme ihe niile dị ike iji hụ na nchekwa Merrimack ruo ọtụtụ afọ na-abịa," kwuru, sị State Senator Diana DiZoglio (D-Methuen). “Onyinye a ga-enyere obodo Haverhill aka na ịnabata teknụzụ iji bulie arụmọrụ na usoro ịmị mmiri mmiri. Imeziwanye ụlọ ọrụ anyị na-ehicha mmiri bụ ihe dị mkpa iji hụ na ahụike na nchekwa abụghị naanị ndị bi na osimiri na-atụrụ ndụ na egwuregwu, mana maka anụ ọhịa ndị kpọrọ Merrimack na ụlọ obibi ya. ”
"Ego a sitere na MassCEC ga-enye Hull ohere ịhụ na ebe nchekwa mmiri ha na-agba ọsọ na enweghị nsogbu ọ bụla," kwuru State Senator Patrick O'Connor (R-Weymouth). “N’ịbụ obodo dị n’ụsọ osimiri, ọ dị mkpa maka sistemụ anyị ịgba ọsọ nke ọma ma nwekwaa nsogbu.”
"Anyị nwere obi ụtọ na MassCEC ahọrọla Haverhill maka onyinye a," Onye nnọchi anya gọọmentị kwuru Andy X. Vargas (D-Haverhill).“Anyị nwere ihu ọma inwe nnukwu ndị otu na mmiri mkpofu nke Haverhill nke jiri amamihe mee ihe iji meziwanye ọrụ ọha na eze. Enwere m ekele maka MassCEC ma na-atụ anya na m ga-aga n'ihu na-akwado atụmatụ steeti nke na-agbanwe ma melite ogo ndụ maka ndị bi na anyị. ”
"Commonwealth nke Massachusetts na-aga n'ihu na-ebute ego na teknụzụ ụzọ iji bulie ogo mmiri na mmiri niile anyị na isi iyi mmiri ọ ,ụ ,ụ," Onye nnọchi anya steeti ahụ bụ Linda Dean Campbell (D-Methuen) kwuru. "Ana m ekele City nke Haverhill maka itinye teknụzụ ọhụrụ a na ọnụ ahịa ya maka mmezi mmiri mkpofu ha yana ime ka ihe mgbaru ọsọ a bụrụ ihe kacha mkpa."
"Anyị nwere ekele maka itinye ego nke Commonwealth na obodo anyị iji gbasaa ojiji nke Town maka teknụzụ iji rụọ ọrụ nke ọma, yana n'ikpeazụ maka nchekwa na ahụike gburugburu ebe obibi," Onye nnọchi anya steeti ahụ bụ Joan Meschino (D-Hingham) kwuru.
"Amamịghe echiche bụ nnọọ na-ekwe nkwa na nkà na ụzụ na ike ukwuu melite arụmọrụ na arụmọrụ," onye nnọchi anya gọọmentị Lenny Mirra kwuru (R-West Newbury). "Ihe ọ bụla anyị nwere ike ime iji belata mkpa ike, yana nitrogen na phosphorus outflow, ga-abụ mmụba dị mkpa na gburugburu ebe obibi anyị."